Guddoomiye Sheekh Cusmaan Barre: Baarlamaanka Puntland waxaan ka soo baranay casharro muhiim ah – Kalfadhi
Guddoomiye Sheekh Cusmaan Barre: Baarlamaanka Puntland waxaan ka soo baranay casharro muhiim ah
Sheekh Cusmaan Barre Maxamed, Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ee Hirshabeelle oo katirsan wafdiigii ka qeyb-galay Munaasabadda caleema-saarka ee Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in Munaasabadda kadib uu kulamo la soo qaatay Guddoonka Baarlamaanka Puntland. Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa sheegay inuu booqday Xarunta Baarlamaanka iyo Guddiyada islamarkaana uu ka soo faa’iday waayo aragno casharro muhiim ah.
Sheekh Cusmaan Barre ayaa sheegay in soo dhoweyn wanaagsan oo walaaltinimo iyo qadarin xambaarsan ay kala kulmeyn mas’uuliyiinta Puntland, gaar ahaan Guddoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaanada. Sidoo kale Sheekh Cusmaan Barre ayaa sheegay inu kulamo la soo qaatay dhiggiisa Baarlamaanka Puntland.
“Waxaan kala kulmay soo dhoweyn weyn waxayna noo muujiyeen tixgelin iyo walaaltinimo qiimo badan”, ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Sheekh Cusmaan Barre. “Munaasabadda kadib waxaan kulamo la soo qaatay Guddoonka waxaana kawada hadalnay sidii aan uga faa’ideysan laheyn waayo aragnimada Baarlamaanka Puntland oo 20 sano jirsaday”, ayuu yiri Sheekh Cusmaan Barre.
“Xarunta Baarlamaanka ayey nagu soo dhoweeyeen Munaasabadda kadib waxaan kormeernay nidaamka shaqo iyo shir guddoon ee Golaha Wakiilada waxaana halkaas ka soo faa’idnay casharro muhiim oo wax u tara Baarlamaanka Hirshabeelle”, ayuu yiri Sheekh Cusmaan Barre oo hadalkiisa sii wata.
Sheekh Cusmaan Barre iyo wafdi Xildhibaano ah oo ku wehliyay safarkiisa ayaa muddo isbuuc ku dhaw ku sugnaa magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxayna halkaasi uga qeyb galeen Munaasabadda caleema-saarka Madaxweyne Deni. Munaasabadda kadib ayey sidoo kale maalmo kulamo ah waxay la soo qaatayn Guddoonka iyo Guddiyada Baarlamaanka Maamulka Puntland iyagoo kawada hadlay xaaladda xiriir ee labada Baarlamaan ee Hirshabeelle iyo Puntland.
Guddiyada Joogtada ee Baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta ka shiraya Ajandaha Kulanka Sabtida
Senator C/qaybdiid, Xubno kale oo Xarigga ka jaray Isbtaal laga hergilyay Mudug